Bitcoin Sports Kubheja Bonus - Kugamuchirwa, Deposit & Kuvimbika Promos
Nitrogen Sports Ongororo
2021 Kurume Kupenga Nitro Mabhureki
Sarudza kubva pamatanho matanhatu (6) eNitro Brackets makwikwi (YEMAHARA kana betslip kutenga-mukati) ye2021 Kurume Kupenga uye uwane mukana wekutora mugove weiyo yakazara 0.109 BTC (~ $ 5,900) inokosha mibairo. Mabhureki ese akavhurwa kuti vatambi vako vapinde.
2021 Kurume Kupenga Nzvimbo dzeNitro
28 Kurume Madness Nitro Zvikwata zvinokwikwidza zvichave zvakavhurwa kune vese Nitrogen Sports vatambi kuti vapinde. Kupfuura 0.195 BTC (~ $ 10,840) mumubairo unenge wakamirira kuburitswa nevakakunda rombo rakanaka.
2021 Kurume Kupenga Nitro Picks
Wedzera zvinonaka kune yako yekupedzisira Four yekuona ruzivo nekubatana neyedu YEMAHARA Nitro Picks makwikwi anouya nemubatanidzwa mubayiro we0.004 BTC (~ $ 240)
2021 Kurume Kupenga Blackjack Tournament
Kutaura nezveFinal Four, mutambo weBlackjack Freeroll uchavhura vatambi veNitrogen Sports kana pachinge paine zvikwata zvina chete zvasara zvakamira muBig Dance. Isu zvakare tine imwe nhabvu yeBlackjack Freeroll panguva yemutambo wechikwata.
2021 Kurume Kupenga Poker Zviitiko
Iva nekumhanya kwakadzika pamatafura mune mashanu (5) Nitro Poker Kurume Kupenga zviitiko. Ndiwo matatu matafura e freeroll uye zviitiko zviviri zvekudzorera zvevatambi zvavanosarudza kubva.
1. Slots Superstar vhiki yevhiki kumhanya (Slots) - Tamba mitambo mitsva uye yakaratidzwa paCloudbet pakati peChishanu neSvondo. Imwe 1BBB inokuwana iwe 1 point. Mutambi ane mapoinzi mazhinji anowana chikamu chihombe cheiyo chiuru chemahara spins paChronos Joker, iyo 1,000-reel slot.
2. Super 6 Bhonasi - Yemahara 1 mBTC bhonasi Svondo yega yega kune vakavimbika, vane rombo vatambi. Ingoisa bhajeti shoma ye2 mBTC mumari chaiyo mazuva ese kubva Muvhuro kusvika Mugovera, wobva wamutsa mabhonasi akaunganidzwa nemusi weSvondo. Iwo mabhonasi anogona kushandiswa pamitambo yemitambo yeCloudbet uye kasino.
3. Turbo China Rodha zvakare Bonus - tora bhonasi 50% yekudzoserwa kusvika pamakumi mashanu mBTC paunochengetedza yega yeChina (pakati pa50: 05 - 00: 23 UTC) uye chengetedza dhiziro yekugara uchiita chero huwandu mukati memazuva matatu apfuura.
4. Mega mechi Muvhuro - tora iyo 50% Rodha Bonus inosvika pamamita makumi maviri neshanu kana BCH / ETH yakafanana Muvhuro wese kana iwe ukaita diki dhipoziti ye25 mBTC kubva Chishanu kusvika Muvhuro (pakati pa1: 05 kusvika 00:23 UTC neMuvhuro) .
5. Welcome Bonus - Vatsva-vakanyoreswa vashandisi vanogona kuwana 100% Deposit Match Bonus muBTC, ETH & BCH pavanogadzira yavo yekutanga dhipoziti ye0.01 BTC / BCH / ETH.
1. Mazhinji Bheti Yakawandisa - Vatambi vanogona kukwidzirisa vese avo mashanu emakumbo egumbo kuwanda pamitambo ipi neipi uye esports nhandare kuwedzera mari yavanowana. Mabheti ese anofanirwa kuve nemhepfenyuro shoma ye5 uye yekubheja kwakanyanya kweMBB1.50.
2. Multi-Bet Inishuwarenzi - wana bheji yemahara kana gumbo rako re 5+ kubva kuMulti-Bet Multiplier rikarasikirwa gumbo rimwe. Dzvanya sarudza-yekusarudzo pane iyo Multi-Bet Multipfer kuti uite inishuwarenzi.
3. Awesome Foursome - Wina mabheti mana mumutsara pamitambo yetsiva kana mitambo yemasino mukati mevhiki yako yekutanga dhipoziti, uye uwane imwe $ 40.00 Yemahara Bhe.
4. Super Streak Dambudziko - Gwina mabheti gumi nemashanu mumutsetse panguva yemwaka uno wePremier League League uye kuhwina $ 11 1,000.00 mumari. Promo inoguma muna Chivabvu 31, 2020.
5. EPL Mazuva ese Yekufungidzira Bhodhi - Gwina rwendo kuenda kuEuro 2020 Fainari uye uwane mabheji emahara kana mabhonasi emwedzi kana iwe uchisarudza timu yako vhiki rega rega pamutambo weFantasy. Promo inoguma muna Chivabvu 18, 2020.
6.Sportsbet's Social Media Promos - Vatambi vanogona kupindura kumashambadziro enhau enhau nemavhidhiyo akatumirwa naSportsbet. Vashandisi vane rombo rakanaka vanogona kubhejera mahara uye mimwe mibairo mushure menguva yekusimudzira.
7. Sarudza Yako Yemari Mutengo Inowedzera - Sarudza mutengo mumwe unowedzera pazuva pamusika chero wemitambo kuti uwedzere mikana yako yekukunda. Iyo inowedzera inoshanda rese maawa makumi maviri nemana.
1. Gamuchirwa Bonus - kunyoresa pa 1xbit kuburikidza nedesktop kana nhare uye gadzira diki dhizaini yemamita mashanu kuti utore bhonasi inogamuchirwa inosvika pa5 BT.
2. Accumulator yeZuva - sanganisa rako rese rinogara uye rinowanzoitika mabheti emitambo uye kuita kwako kusawedzerwa ne10%.
3. Promo Code Store - chirongwa chekuvimbika kune vashandisi varipo. Vatambi vanogona kushanyira muchitoro kutenga mabheti emahara vachishandisa bhonasi point inounganidzwa kubva kune ese ese mabheti muakaundi yake.
4. Star Jackpot Kupa - Vashandisi vachazopihwa mabasa ekubheja kuti uite zuva rega rega. Imwe neimwe ine yayo mamiriro uye mamiriro. Kana mamiriro acho agutsikana, vashandisi vanogona kuwana zuva rega rega jackpot nenzira yemahara mabheti anoshanda pamitambo uye zviitiko zvehupenyu.
5. 100% Bet Inishuwarenzi - Iyo yakabhadharwa-yeinishuwarenzi sevhisi yechikamu kana yakazara mabheji uye isina kuroora kana dhizi kubheja. Kana iyo bheji ikarasikirwa, iyo chikamu cheinishuwarenzi chinodzoserwa.
1. Mutsva weVatengi Kupa (Sarudzo 1) - vashandisi vatsva vanogona kukwira ku € / $ 30 yemahara mabheti nediki diki reU / / $ 10.
2. Mutsva weVatengi Kupa (Sarudzo 2) - vashandisi vatsva vanogona kukwira kusvika pamazana zana emabhonasi emitambo (kana € / $ 100) pane yakadzika 250st dhipoziti yeUK / $ 1. 20nd uye 2rd deposits inopa € / $ 3 uye € / $ 250 mabhonasi, zvichiteerana.
3. Yemahara Bet Club - vatsva uye varipo vashandisi vanogona kubheta mashoma emari inosvika makumi maviri nemashanu pamadhora chero ezvemitambo (25 kana anopfuura sarudzo) uye kuwana £ 3 yakakosha yemabheti emahara.
1. Yemahara Bhe Gamuchiro Inopihwa - vashandisi vatsva vanogona kuwana 100% mechi bhonasi inosvika € 200 nenzira yemahara mabheti. Chekutanga dhipoziti yemari gumi inodikanwa.
2. Spin Specials - musika wemitambo uri pasi peSpin Specials unenge uine zuva nezuva kusawirirana kwakawedzera kuwedzera mikana yako yekukunda. Mateki uye misika inozorodza zuva rega rega.
1. Njodzi-Yemahara Bet - Kwemwedzi wese waMbudzi, vatambi vanogona kuwana njodzi-isina kubheja inosvika kumadhora gumi munhabvu, basketball, ndyumu, tenisi, mma, uye hockey mechi. Mari shoma yekuUS $ 10 uye kubheta kwakanyanya kweUS $ 10 kunodiwa. Promo inoguma munaKurume 10.
1. 150% Gamuchira Bonus - vashandisi- vanyorese vashandisi vanogona kuwana 150% yekugamuchira bhonasi pane yavo yekutanga dhipoziti ye1.5 BTC, 15 ETH kana 150 LTC.
2. Refer Shamwari - vatambi vanobatana nechirongwa chemubatanidzwa vanogona kuwana kusvika pamakumi matatu muzana yebhonasi
1. 100% Yekutanga Dhipo YeBhonasi - yakavhurika chete kune vatambi vachangobva kuwana iyo Bronze Level II VIP mamiriro. Pane yako yekutanga dhipoziti, unogona kuwana 100% bhonasi inosvika 1 BTC (chikwereti chiuru) uye 1,000 yemahara spin.
2. 50% 2nd Deposit Bonus - chete yakavhurika kune vatambi vachangobva kuwana iyo Bronze Level II VIP mamiriro. Pane yako yekutanga dhipoziti, tora makumi mashanu muzana bhonasi inosvika 50 BTC (chikwereti chiuru) uye 1 yemahara spins.
3. 25% Yechitatu Deposit Bonus - chete yakavhurika kune vatambi vachangobva kuwana iyo Bronze Level II VIP chimiro. Pane yako yekutanga dhipoziti, unogona kuwana 25% bhonasi inosvika 1 BTC (chiuru chikwereti) uye 1,000 yemahara spins.
1. 100% Dhipoziti bhonasi - tora 100% dhipo bhonasi inosvika kuM₿50 kana ukaisa atleast 10 mBTC.
2. Acca Bonus - nevakaunganidza, unogona kukwira kusvika pamakumi matanhatu muzana mabhonasi pamabheti ako ese emutambo.
1. Gamuchirwa Dhipatimendi Inopihwa - vashandisi vatsva vanogona kuwana 100% dhipoziti mutambo wekusvika kumadhora zana nemashanu pane yavo yekutanga dhipo AU $ 150 muhomwe yemari uchishandisa promo kodhi WH10. Promo inoguma muna Kubvumbi 150, 30.
2. 3 Bet Inowedzera - katatu nguva kubheja inokwirisa pamhanya bhiza pamutambi wega wega. Maximum danda rekusvika kune makumi maviri emadhora kana £ 3 nzira imwe neimwe.
3. Yakakura Kubheja Kubheja Bhaidhi - kusanganisa betri ne 3+ kusarudzwa kunowanikwa kune chero mitambo. Maximum danda re £ 20 kana £ 20 nzira imwe neimwe.
1.100% yekugamuchira bhonasi - dhipoziti reshoma € 15 rinogona kukuwanira iwe 100% yakafanana bhonasi kusvika ku € 50. Shandisa iyo promo kodhi: PLAY10.
2. 50% Acca Inosimudzira - Kubheja kweAcca kwemakumbo matatu kana anopfuura kunogona kukurudzira winnings neanosvika makumi mashanu muzana.
3. "Hapana Score? Hapana Dambudziko" Kubheja - paunobheja € 10 pamusika chero wevanohwina, kubheja kwako kuri kurasikirwa kunoguma 0-0 kunodzosera € 10 yemahara kubheja.
4. Juventus Mahara Bhe - kana iwe uchitamba
5. 10bet Shanduko - vashandisi vatsva uye vanoshandisa vashandisi vanogona kuwana kukanganisika kwepamusoro pamitambo yese pasi rose.
1. Saina-kumusoro Kana Rodha zvakare Bhonasi - vashandisi vatsva vane shoma dhipoziti remadhora vanogamuchira bhonasi inonzi sekutamba kwemahara.
2. Mubairo Pfungwa - wana $ 1 yakakosha yemahara kubheja pamadhora mazana maviri emitambo yekubheja zuva rega rega.
3. Mabhiza Mabhiza - mabhiza anomhanya vatengesi vanogona kuwana kusvika ku7% mabhonasi pamabheti avo ese anoenderana nemabhiza vhiki nevhiki.